PAIKADY FANARENANA NY ORINASA JIRAMA : Irosoana ny famongorana ireo mpampiasa herinaratra tsy ara-dalàna – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:32
Nisy ny fidinana ifotony, nitsirihina ireo mangalatra jiro.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/PAIKADY FANARENANA NY ORINASA JIRAMA : Irosoana ny famongorana ireo mpampiasa herinaratra tsy ara-dalàna
Manoloana ny halatra miseholany amin’ny resaka jiro, nanapa-kevitra ny avy amin’ny orinasa Jirama fa hamongotra ireo mpampiasa herinaratra tsy ara-dalàn, ho fanarenana ny orinasa. Ampolony maro no efatra nanomboka ny novambra no ho mankaty. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 5 décembre 2020
Mitohy ny hetsika famongorana ny fampiasana herinaratra sy rano tsy ara-dalàna ataon’ny Jirama, izay tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa. Nanatanterahana ny hetsika ny alarobia lasa teo, teny Anosy, izay notarihin’ny “Cellule de Lutte Anti-Fraude et Vol” eo anivon’ny Jirama sy ny DPRLF na ny “Direction de la Protection de Revenu et de la Lutte contre les Fraudes”, izay niarahana nanatanteraka tamin’ny Daci na ny “Direction de l’Audit et du Contrôle Interne” sy ny DTEA “Direction Technique Électricité Antananarivo”. Mpanjifa 16 no notsirihina, izay misehatra amin’ny fanefena vy ny ankamaroany. Tsy fanarahan-dalàna miisa 11 no sarona toy ny kaontera tsy misy “disjoncteur”, fizarazarana herinaratra, kaontera nesorina, nefa ny herinaratra mandeha, fanindronana tariby hisintonana herinaratra… Notapahina avy hatrany ireo herinaratra tsy ara-dalàna ireo ary nanokatra fanadihadiana lalina ny Jirama . Miantso hatrany fiaraha-miasa amin’ny daholobe amin’ny fitoriana ireny tranga halatra herinaratra sy rano ireny, izay miteraka fatiantoka goavana ho an’ny orinasa ny Jirama. Antony maharatsy kalitao ny famatsiana herinaratra sy rano koa ny tahaka izany.
Efa maro ireo tra-tehaka…
Efa nisy ny hetsika famongorana ny fampiasana herinaratra sy rano tsy ara-dalàna nataon’ny Jirama manodidina ny Anjerimanontolo, izay tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa. Teny Antsahameva sy Antsahamamy, Ankatso no nanatontosana ny hetsika, ny 26 novambra lasa teo. Tokantrano anjatony no nanaovana be midina ka 18 no tra-tehaka mampiasa herinaratra tsy ara-dalàna. Tokantrano iray koa no hita fa misintona herinaratra mivantana amin’ny andrin-jiro ary mizara amin’ny tokantrano dimy hafa manodidina. Mpiasan’ny Jirama iray no fantatra fa atidoha mikotrika izao fampidiran-jiro tsy ara-dalàna izao ka nosamborina avy hatrany ary tanana eny amin’ny Borigadin’ny Zandarimaria eny Betongolo. Tsy mandefitra na amin’iza na amin’iza manao izao asa ratsy izao ny Jirama, raha ny angom-baovao.
Fatson-drano 12 m nisy nangalatra
Ny fiandohan’ny volana desambra lasa teo, fantson-drano mirefy 12 metatra no nisy nangalatra teny amin’ny tobim-pamokaran-drano Amoronakona ary 6 metatra no simba nandritra ny fangalarana. Tapaka, araka izany, ny famatsian-drano teny Ambohimangakely sy Ambohimahitsy, izay nisitraka izany hatramin’ny niasan’ity tobim-pamokaran-drano, mamokatra 100m3 isan’ora ity. Nirosoan’ny teknisianin’ny Jirama ny fanoloana ny very, amin’izao fotoana izao. Rehefa vita izany dia hiverina amin’ny laoniny ny famatsian-drano amin’ireo toerana ireo. Na izany aza, ny Jirama dia naneho ny fialan-tsiny noho ny fanelingelenana aterak’izany ary nankasitraka ny mpanjifany amin’ny faharetana.